Tao Amin’ny Tsenan’ny Mozikan’i Bogotá, Miresaka Ny Vinan’ny Fandriampahalemana Ny Tanora Mpiangaly Mozika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2016 5:06 GMT
Niaka-tsehatra tao amin'ny Tsenan'ny Mozikan'i Bogota ny tarika hip-hop elekitropikaly, Systema Solar. Sary: Betto Arcos
Ity lahatsoratra avy amin'i Betto Arcos ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 29 Septambra 2016. Navoaka teto indray izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Hifidy ny Kolombiana amin'ny 2 Oktobra raha hankatoa na tsy hankatoa ny fifanarahana momba ny fandriampahalemana nifampiraharahana teo amin'ny governemanta sy ny mpiady anaty akata FARC mba hamaranana ny ady naharitra 50 taona. Nandritra ny fetiben'ny Tsenan'ny Mozikan'i Bogotá, fantatra koa amin'ny hoe BOmm, niresaka momba ny hoavin'ny fandriampahalemana ao Kolombia ireo tanora mpiangaly mozika.
Notontosaina nandritra ny fotoana mampihetsehi-po ho an'i Kolombia ny famoriam-bahoaka fanao isan-taona. Tao an-tsain'ny tsirairay ny dinan'ny fandriampahalemana sy ny latsa-bato.
Mitantana tarika jazz antsoina hoe Fatso i Daniel Restrepo. Ao anatin'ny mpanohana ny “eny” izy ary nilaza hoe, “Henjana ity fotoana ity. Fa tsy adim-pahendrena akory, saingy nanjary fotoana ara-tsosialy misy fihenjanana. Mankany amin'ny “eny” ny olona, mankany amin'ny “tsia” ny olona. Izaho kosa mankany amin'ny hoe “raha misy ny azo atao tsy hisian'ny famonoana olona intsony, dia mifidy ny “eny” aho.’ Tsy fantatro raha mahomby izany, misalasala aho indraindray. Ady efa naharitra ela izy ity, ka maro ireo karazan'olona tao anatin'izany hatry ny fahakely, ka tena sarotra dia sarotra. Saingy mino aho fa misy ny vintana ahafahana manomboka ny dingana ho any amin'ny fandriampahalemana, tena zava-dehibe izany. Mahafinaritra izany fotoana izany. Mino aho fa misosa tsara ny zava-drehetra.”
Mpihira Kolombiana Maria Mulata nanao fampisehoana tao amin'ny Tsenan'ny Mozikan'i Bogota 2016. Sary: Betto Arcos
Maka ny “eny” ihany koa ilay mpihira Maria Mulata. Fony izy enin-taona izy nanoratra ny hirany voalohany “Quiero Paz”, midika hoe “Mila filaminana aho”.
“Injany ny hiran'ankizy miaraka amin'ny teny hoe, ‘Mila filaminana eto amin'izao tontolo izao aho, ianao sy izaho. Andao hilalao, fa tsy hanao kilalao ratsy’. Izany ny iray amin'ireo hira tamin'ny raki-kirako voalohany narakitro niaraka tamin'ny anadahiko. Natao izany satria tsy mba niaina fandriampahalemana mihitsy izahay”, hoy izy.
Nandritra ny fampisehoana antsoina hoe “Misotro ho amin'ny Fandriampahalemana”, tanora an-jatony no nandihy tamin'ny mozikan'i Canalón de Timbiquí, tarika Afro-Kolombiana nentim-paharazana manamorona ny morontsiraka Pasifika ao amin'ny firenena. Nilaza ilay mpihira Nidia Góngora fa niaritra ny mafy ny faritra nisy azy. Saingy vao fanombohan'ny zavatra tokony hitranga fotsiny ny dinan'ny fandriampahalemana.
“Firenena ahitana hantsana ara-piarahamonina lalina i Kolombia, ary raha mbola misy ny hanoanana, sy ny tsy fisian'ny fanabeazana sy ny fitsaboana ho an'ny mahantra, dia tsy hitsahatra ny tena ady,” hoy izy.
Ny Canalón de Timbiquí dia tarika Afro-Kolombiana nentim-paharazana avy ao amorontsiraka Pasifika ao Kolombia. Sary: Betto Arcos
Mahalala zavatra mikasika izay aorian'ny fampiharana ny dinan'ny fandriampahalemana i Stuart Bailie. Mpiara-manorina ny Foiben'ny Mozika Oh Yeah ao Belfast izy. Efa tao Bogotá izy nanao lahateny momba ny anjara asan'ny mozika nandritra sy taorian'ny Korontana tao Irlandy Avaratra. Nilaza i Bailie fa ilaina ho an'ny tanora tahaka azy nandritra ny taona 70s sy 80s ny mozika rehefa nizotra tao anatin'ny zava-dratsy indrindra ny toe-draharaha.
“Nanana sehatra punk tena matanjaka izahay, izay tena tia mikomy, ary somary niteny tamin'ny olona izany mba tsy hiraharaha ireo fomban-drazana roa sy hijery ny lalanao manokana ho an'i Ulster,’ raha ampiasaina ny fehezanteny avy amin'ny tarika Stiff Little Fingers. Hany ka nanafaka ny taranaka indray nihira taminay ny mozika, nanafaka ny sainay izany. “
Nilaza i Bailie, izay efa ao Kolombia amin'izao fotoana izao hoe, fa mahatsapa fanantenana misy fahamailoana izy. Tsy mbola misy olona manipy satroka eny amin'ny rivotra hatreto, [horakora-pifaliana] hoy izy, saingy mahatsapa ny olona fa afaka sy hiova ho any amin'ny tsara kokoa ny toe-draharaha.
“Angamba nihaona tamin'ny olona 20, 30 aho izay miasa amin'ny fomban'izy ireo manokana avokoa amin'ny fananganana ny hoavin'i Kolombia amin'ny alalan'ny mozika, ary tena mahafinaritra izany, sady tena tsara ho an'ny [fidobodoboky ny] foko. Tsy afaka hieboabo hahatakatra manontolo ny toetry ny zavatra miseho eto aho. Fa ny fantatro fotsiny dia, ny fehezanteniko dia hoe: ‘tsy hamela anao ho kivy ny mozika’, eo foana ny mozika, ary tsy mampino ny hery asandrany”.